Frank Lampard oo si weyn u amaanay xiddig ka tirsan Chelsea, kaddib markii uu sameeyay arrintan cajiibka ah – Gool FM
(London) 15 Luulyo 2019. Macalinka kooxda Chelsea ee Frank Lampard ayaa amaanay hab dhaqanka ciyaaryahanka cusub ee Blues Christian Pulisic, kaddib markii uu go’aansaday inuu soo afjaro fasaxiisa, si uu ugu biiro xerada tabaabrka Chelsea isla markaana uu ugu diyaar garoobo xili ciyaareedka cusub.
Christian Pulisic oo u soo ciyaaray kooxdiisii hore ee Borussia Dortmund xili ciyaareed dheer, sidoo kale xulkiisa qaranka Mareykanka kala qeyb galay tartanka Concacaf, ayaa go’aansaday inuu ku biiro Talaadada bari ah xerada tabaabrka ay haatan ku sugan tahay kooxdiisa cusub Chelsea ee dalka Japan.
Hadaba kaddib go’aankan uu gaaray Christian Pulisic ayaa waxay farxad galisay Macalinka kooxda Chelsea ee Frank Lampard wuxuuna yiri:
“Christian Pulisic wuxuu safarayaa isaga kaligiis si aan ugu wada kulano dalka Japan, wuxuuna qaatay fasax gaaban”.
“Run ahaantii, wuxuu doonayaa inuu si dhaqsi ah ugu soo biiro kooxdeena, taasoo aan shakhsi ahaan in badan qadarinayo, taasina waa waxa aan sameyn lahaa”.
“Xilligan la joogo, waxaan la dhibtooneynaa dhaawacyo qaar waana hubaal waan u baahanahay isaga”.
Yeelkadeeda, Chelsea uu hogaaminayo macalinkeeda cusub ee Frank Lampard ayaa waxay ciyaartay 2 kulan, kulan waxay galeen barbaro, halka kulanka kalena ay ku adkaadeen 4-0.